Hubi in aad maqashay in aad u baahan tahay in ay nadiifiso cookies aad iPhone mar mar ayey baan ahay. Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan sababta aad u rabto lahaa in ay nadiifiso cookies yahay si aad u dedejin kartaa in aad iPhone. Haddii aad isku aragtay in iPhone waa la ayuuna sanadkan, waxaad u baahan kartaa in ay nadiifiso cookies aad. La baneeyo cookies aad ayaa badan oo faa'iidooyinka laga reebo kaliya hagaajinta iPhone ee waxqabadka. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah;
• Pages aad Safari browser ku shuban doonaa si dhakhso ah
• Downloads sidoo kale jiri doona si ka dhaqso badan waxay ahaayeen
• Banaynta cookies aad u siyaadiyaa bannaan ee aad qabto ee aad taleefan si loo hubiyo in si fiican qaab ad meel lagu kaydiyo dheeraad ah.
• takhalusid cookies aad sidoo kale hoos u tirada iyo inta jeer qaladaad browser laga yaabaa in aad hesho.
Hadda oo aad ogtahay sababta aad u rabto in aad tirtirto cookies ku saabsan iPhone, waxaa muhiim ah in aad fahamto sida loo sameeyo in si waxtar leh. Waxaa had iyo jeer dhib yar in lagu sameeyaa haddii aad leedahay qalab u oggolaan doontaa in aad kaliya la caddeeyo waxyaabaha aad u baahan tahay oo sameeya si wax ku ool ah oo si fudud. Mid ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan ee lagu caawiyo in aad tirtirto cookies aad iPhone si fudud waa Safe Wondershare ka Eraser. Sidan sababta Safe Eraser waa kan ugu fiican.
• Kuu ogolaanayaa inaad si ammaan ah tirtirto dhammaan macluumaadka shakhsiyeed oo ay ku jiraan macluumaad bangiyada iyo sirta login. Tani waa mid aad u muhiim ah marka aad rabto in aad ka saarto xogta sida ka hor iibinta ama laga takhaluso aad telefoon.
• Delete dhammaan macluumaadka aad rabto in aad la tirtiray iyo in la hubiyo in ay tahay unrecoverable. Ma uusan ka tagi waddo u soo kabashada ee xogta aad.
• Dooro files ee aad jeclaan lahayd in ay tirtirto ama ay doortaan in ay tirtirto qalabka oo dhan.
• wax ku ool ah in qaar ka mid ah meel tan iyo markii aad tirtiri kartaa qaar ka mid ah files ah uma baahnid inaad la xorayn, ilaa.
• Bixisaa dhammaan faylasha junk ka iPhone si loo hubiyo in qalabka la bandhig heer aan fiicnayn.
Tallaabada Koowaad : ka dib rakibidda iyo ordaya version saxda ah ee Wondershare Safe Eraser on your computer, xiriiriyaan iPhone in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Waa in aad ka dib markii uu furmo suuqa hoose mar iPhone si sax ah ugu xiran.
Tallaabada Labaad : Codsiga iskaan doonaa iPhone ee dhammaan taariikhda Safari iyo cookies. Taariikhda Safari iyo cookies ku jira xogta gaarka ah. Sidaa darteed, guji "masixi Private Data"
Talaabada Sadexaad : Marka scan waa dhameystiran, Safe Eraser muujin doonaa oo dhan Safari Cache ku, Safari Taariikhda iyo Safari Kukiyada. Si aad u tirtirto cookies ah, fiiri ka dibna riix "masixi Hadda".
U hubso in aad iPhone ku xiran si aad u computer marayo nidaamka oo dhan si loo hubiyo in dhammaan cookies waxaa si fiican u tirtirayaa.
> Resource > iPhone > Sida loo Delete Kukiyada on iPhone